Ahoana no hahafantaranao ireo mpahay momba ny kolejy
Ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny Manam-pahaizana
Aza atahorana amin'ny olona iray izay nisy mpianatra toa anao
Mety ho tezitra tanteraka amin'ireo mpampianatra anao ianao, na mety ho te hihaona amin'izy ireo nefa tsy hahalala izay tokony hatao aloha. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny mpampianatra maro dia mpampianatra satria te te-hampianatra sy hifanerasera amin'ny mpianatra eny amin'ny oniversite. Ny fahafantaranao ny fomba hahafantarana ny mpampianatra anao dia mety ho farany amin'ny maha-iray amin'ireo fahaiza-manao tena mahafa-po indrindra ianaranao mandritra ny fotoanao any am-pianarana.
Mandehana any am-pianarana isan'andro
Mpianatra maro no manamaivana ny maha-zava-dehibe izany.
Raha ny marina, ao amin'ny efitrano fianarana mpianatra 500, ny profesora anao dia tsy mahatsikaritra raha tsy eo ianao. Saingy raha toa ianao ka dia ho fantatrao ny tarehinao raha toa ianao ka mahatsikaritra kely.
Miverena amin'ny fanendrena anao amin'ny fotoana
Tsy tianao ny hahatsikaritra anao ny mpampianatra anao satria miangavy mandrakariva ny fampivelarana ianao ary mamadika zavatra amin'ny farany. Marina fa hahafantatra anao izy, nefa tsy araka ny tianao.
Mametraha fanontaniana ary ampio ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny kilasy
Izany dia fomba tsotra ahafahan'ny mpampianatra hahafantatra ny feonao sy ny endriny ary ny anaranao. Mazava ho azy, mametraha fanontaniana fotsiny raha manana fanontaniana ara-drariny ianao (andininy mangataka iray fotsiny noho ny fangatahana) ary ampiharo raha manana zavatra holazaina ianao. Na izany aza, ny fahafaha-manankarena dia manana fahafahana manampy amin'ny kilasy iray ary afaka mampiasa izany ho tombontsoanao.
Mandehana any amin'ny biraon'ny mpampianatra anao
Atsaharo ny mangataka fanampiana amin'ny devoaranao. Mijanòna hangataka torohevitra amin'ny taratasy fikarohana.
Ajanony ny mangataka ny hevitry ny mpampianatra anao mikasika ny sasany amin'ireo fikarohana ataony, na ny boky niresahany momba ny fanoratana. Atsaharo ny manasa azy ho any amin'ny tononkalo poezia amin'ny herinandro ambony. Na dia mety hieritreritra ianao amin'ny voalohany aza fa tsy misy ny miresaka amin'ny profesora momba izany, dia misy zavatra maro azonao resahina amin'ny mpampianatra anao .
Ary ny fananana fifampiresahana iray isaky ny iray dia ny fomba tsara indrindra hanombohana ny fananganana fifandraisana!
Jereo ny Profesora
Mandehana any amin'ny hetsika izay itenenan'ny profesora anao, na amin'ny fivoriana ho an'ny fikambanana na fikambanana izay manoro hevitra ny profesora anao. Ny mpampianatra anao dia mety ho tafiditra amin'ny zavatra ao amin'ny toeram-pianarana hafa ankoatry ny kilasinao. Mandehana mandre azy na mamaky azy ary mijanòna any aoriana any mba hametraka fanontaniana na hisaotra azy noho ilay kabary.
Miangavia mba hipetraka amin'ny iray amin'ireo kilasin'ny mpampianatra anao
Raha miezaka ny hahalala ny profesora ianao - amin'ny fikarohana fikarohana , ho an'ny toro-hevitra, na noho ny fisehony dia tena liana amin'ny zavatra mitovy amin'izany ianao. Raha mampianatra kilasy hafa azonao atao izy ireo, dia anontanio ny profesora raha afaka mipetraka amin'ny iray amin'ireto semester ireto ianao. Haneho ny tombontsoanao eo amin'ny saha izany; Ankoatra izany, tsy isalasalana fa hitarika resaka momba ny antony mahaliana anao ny kilasy, inona ny tanjom-pahaizana azonao amin'ny lisea, ary inona no tena tianao amin'ny lohahevitra voalohany.
Mijanòna kalim-panahy mandritra ny herinandro
Dingana ho an'ny fitantanana matanjaka ny mpianatra mpianatra
Fahatakarana ny anton'ny fanapoizinana
Inona no tokony hataonao raha tsy mitaky kilasy ianao
Ny fomba fiasa amin'ny tetik'asa ao amin'ny Oniversite
Ahoana ny fomba hanaovana peta-kolontsaina lava kokoa
Fanasitranana ho an'ny Senioritis
Ahoana no fomba hametrahana tanjona kolejy
Zavatra horesahina amin'ny Profesora anao
Ahoana ny fiasan'ny "sampana fianarana"?
Ny sarimihetsika tsara indrindra ho an'ireo ankizy izay toy ny robots
Hanampy anao hahazo ny loteria ve ny Magic?
Inona ny Fifanarahana Grammatika Frantsay?
Ireo Top 20 Rock Workout Songs
Ny fomba hanangonana ny fiainanao manokana
TORRES anarana sy anarana
Hazavao ny tohin'ny tifitra gulf, Plus ny fitsipika sy ny etikety
Seth Meyers White House Mpanolotra fandefasana kojakojam-peo
Jefferson sy ny Louisiana Purchase
Torolalana ho an'ny Pasta tsy misy farany sy maharitra tsy miova
Reek, Wreak, ary Wreck
Faerie Lore: Ny Fae ao Beltane
Moa ve ny rafi-panompoana sivily sy ny drafitra mbola ilaina?
Ekoatera: Ny tantaran'i Cantuña
Inona no atao hoe kavina na Tortillon?
Iza moa i Saint Brigid? (Saint Bridget)
Inona avy ny Dance Style no tsara indrindra amin'ny fampakaram-bady voalohany amin'ny fampakaram-bady?
Asa atao any ala sy asa
Sarin'ity horonan-tsary "Amazing Ball Girl Fatch" YouTube Hoax ity
Tetikady miaramila an'ny Jeneraly Dwight D. Eisenhower